कैलालीमा किन भारतीय राष्ट्रगान ?
कैलालीको हौसलापुर गाउँका बालबालिकालाई भारतीय राष्ट्रियगान गाउन लगाइन्छ । नेपालभित्र भारतीय राष्ट्रियगान, सरकार के हेरेर बसेको छ ?
हो, सीमाक्षेत्रका नेपाली भारतीय बजारमा काम गर्न जान्छन्, नूनतेल लुगाफाटो भारतबाटै ल्याउँछन् । उपचार गर्न पनि भारतकै भर छ । हौसलापुरका बासिन्दाका लागि नेपाल धेरै टाढा छ, भारत निकै नजिक छ । किन आफ्नै देश जनताका लागि टाढा भयो ? तिनका लागि गर्नुपर्ने के हो ? सरकार कहाँ छ ? नेपालमा भारतीय राष्ट्रियगान बज्नु भनेको पद्धतिमै खोट देखिएको हो । जुन पद्धतिले देश बाँध्न सक्दैन, त्यो पद्धति धेरै दिन टिक्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रवादी सरकारले तत्काल हौसलापुर र हौसलापुरजस्ता गाउँ ठाउँ कहाँ कहाँ छन्, हेर्नुपर्छ र त्यहाँ त्यहाँ नेपाली राष्ट्रवाद बलियो बनाउन सकिने आधारहरू पु¥याउनु पर्छ ।
हौसलापुरमा नेपाली बोल्न जान्ने वासिन्दा किन छैनन् ? यो दोष सरकार हो, राज्य सञ्जालको हो । सहज ठाउँमा राज्य देखिनुभन्दा यस्ता दूरदराजका गाउँमा राज्य पुग्नुपर्छ । राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ । तबमात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको जनता हुन् । यति बुझ्न ढिला किन ?
हौसलापुर मोहना नदीपारीको सानो गाउँ हो । भारतीय सीमामा जोडिएको यो गाउँ झट्ट हेर्द भारतकै गाउँजस्तो देखिन्छ । कारण यो गाउँमा पैसासमेत भारूमात्र चल्छ । यहाँका मान्छेको रहनसहन, उठबस सबै भारतीयसँगमात्र हुन्छ ।
यहाँका बालबालिका भारतमा पढ्छन् । उच्चशिक्षा पनि भारतमै पढ्न जान्छन्, रोजगारी पनि उतै गर्छन् । एकजना पनि नेपालको जागीरमा छैनन् । नेपालको गाउँलाई यो प्रकारको विभेद र निषेधमा राखिनुहुन्न । तिनले देशको अधिकार पाउनुपर्छ, तिनलाई नेपाली समाज, राज्यधारमा ढाल्नेकाम सरकारको हो ।
अचम्म त के पनि छ भने सरकारले बितरण गर्ने बृद्धभत्ता, एकल महिलाभत्तादेखि कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र उपचारमा समेत सरकारले हेर्दैन ।्
लाग्छ, यो हौसलापुरमा मोहनानदीको प्रकोप परिरहन्छ, कसैले हेर्दैन ।
यस्ता गाउँहरू देशका अन्यभागमा पनि हुनसक्छन् । अध्ययन कसले गर्ने, ती नेपाली भूभागलाई नेपाली रहनसहनमा उतार्ने जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने ?